काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको समीक्षा अवधिसम्म गत वर्षको तुलनामा ३५.९५ प्रतिशतले नाफा बढाउँदै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १.४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने १...
हिमालयन बैंकको नाफा रु. १.२८ अर्ब, अन्य सूचकमा कस्तो छ अवस्था ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म हिमालयन बैंकले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ४४.४५ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ३५.९२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने १...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ५४.१२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा रु. १.२९ अर्ब, रिजर्भ २२.१५%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १०.६० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको...
काठमाण्डौ । कोरोनाकालमा पनि नेपाल बंगलादेश बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सुधारोन्मुख वित्तीय प्रदर्शन गरेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले निष्क्रिय कर्जा कर दर ३० प्रतिशत बढीले घटाउन सफल भएको छ। गत वर्षको यही अवधिसम्म २.७६ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा समीक्षा...
रा.वा. बैंकको नाफा रु. ३.२७ अर्ब, अन्य सूचकमा कस्तो छ अवस्था ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ७.६९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यो अवधिसम्म बैंकको...
निष्क्रिय कर्जा घटाएको नेपाल बैंकको नाफा रु. २.२६ अर्ब, रिजर्भमा पनि बढोत्तरी
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १३.३० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म बैंकको सञ्चालन...
मुख्य सूचकहरुमा कुमारी बैंकको आकर्षक प्रदर्शन, नाफा ७८.५८%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कुमारी बैंक लिमिटेडले अधिकांश सूचकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्ष यही अवधिसम्मको तुलनामा ७८.५८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद...